फेसबुकले ल्याउँदैछ भिडियो कल गर्ने यस्तो आकर्षक नय...
काठमाडौं । विश्वभर सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले भिडियो कलसम्बन्धी नयाँ सेवा सुरु गर्न लागेको छ। अहिले भइरहेको भिडियो कलसम्बन्धी सेवाभन्दा केही थप र फरक विषेशतासहितको सेवा सुरु गर्न लाग...
Suvadin Media 991 0
फेसबुकले ल्याउँदैछ भिडियो कल गर्ने यस्तो आकर्षक नयाँ सेवा
काठमाडौं । देशभर अहिले चिसो बढेको छ । सकेसम्म घरभित्र चिसो नछिरोस् भनेर झ्याल-ढोका सबै बन्द गरेर राखिन्छ । साथै, कोठा र शरीरलाई न्यानो बनाउनको लागि हिटर, कोइला आदिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । तर, यस्ता कुर...
यस्ता छन् जाडो मौसममा सुन्ताला खानुका १० फाइदा
काठमाडौं । कतिपयमा चिसोमा सुन्तला खानु हुँदैन भन्ने धारणा छ। तर चिसो मौसम र चिसो ठाँउमै फल्ने सुन्तलाको महत्व छुट्टै छ। सुन्तला स्वादकालागि मात्र नभइ स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ। मानिसह...
हिल चप्पल तथा जुत्ता लगाउँदा यस्ता दीर्घकालीन समस्...
एजेन्सी । युवतीले लागि अग्ला हिल भएका चप्पल तथा जुत्ता लगाउनु फेसन नै भएको छ। शहरी क्षेत्रमा हिल चप्पल–जुत्ताको प्रयोग धेरै देखिन्छ । हिल भएका जुत्ता–चप्पल लगाएर युवतीहरू आफूलाई ‘...
हिल चप्पल तथा जुत्ता लगाउँदा यस्ता दीर्घकालीन समस्या
एजेन्सी । कतिपय अवस्थामा हामी बच्चाले बोलेको झुटो सत्य हो भनी पत्याउँछौं। किनभने बच्चाले कहिले पनि झुटो बोल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ। तर बच्चाले बोलेको केही कुरा गहिरेर जान्ने–बुझ्ने हो भन...
भगवान गिरी पोर्चुगल । नेपालबाट युरोप छिर्ने सपना धेरै नेपालीमा छ । जीवनलाई सफल बनाउन भन्दै युरोप छिर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । त्यसमा पनि युरोपेली मुलुक पोर्चुगलमा आउने नेपालीको सङ्...
पाण्डेलाई पराजित गर्दै क्यान अध्यक्षमा कुवँर विजयी...
काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल (क्यान) फेडरेशनको अध्यक्षमा नवराज कुँवर विजयी भएका छन् । शनिबार राती साढे ९ बजे सम्पन्न मतगणनामा कुँवर अध्यक्षमा विजयी भएको घो...
पाण्डेलाई पराजित गर्दै क्यान अध्यक्षमा कुवँर विजयी
व्यायाम गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस् !
एजेन्सी । नियमित व्यायाम गरेर वा खेल खेलेर शरीरलाई स्वस्थ, फुर्तिलो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । रोगको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । रगत शुद्धीकरण र रक्तचाप सन्तुलनमा राख्न व्यायाम महत्वपूर्ण सावित हुन्छ ।...
Suvadin Media 672 0
क्यालिफोर्निया । पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय भइरहेको “टिकटक” नामको भिडियो एप डाउनलोड गर्नेहरुको संख्या एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ । सेन्सर टावरको पछिल्लो विवरणमा एप्पलको एप स्टोर र गुगलको प...
मोबाइललाई ‘डार्क मोड’ मा राख्‍नु आँखा र फोन दुवैक...
एजेन्सी । राति सुत्नु अगाडि र बिहान आँखा खुल्नासाथै मोबाइल हेर्ने बानी अहिलेका प्रायः सबै मानिसमा हुन्छ । यस्तोमा लगातार फोनको चकिलो स्क्रिन हेर्दा थाकेको हाम्रो आँखाका लागि पछिल्लो समय आएको नयाँ &lsq...
Suvadin Media 278 0
मोबाइललाई ‘डार्क मोड’ मा राख्‍नु आँखा र फोन दुवैका लागि राम्रो
बालबालिका लक्षित सेटिङ् फेर्दै युट्युब, यी कुरामा...
काठमाडौं । भिडियो शेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबले आफ्नो सेटिङमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । युट्युबले मुद्रीकरण प्रक्रिया तथा सामग्री पत्ता लाग्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्न सक्ने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्न ल...
Suvadin Media 328 0
बालबालिका लक्षित सेटिङ् फेर्दै युट्युब, यी कुरामा हुँदैछ परिवर्तन ?
टिकटकबाट भिडिया बनाउनुहुन्छ ?, यस्तो खतरा !
बीबीसी । हाल भिडियो शेयरिङ एप, टिकटकका ५० करोड भन्दा धेरै एक्टिभ प्रयोगकर्ता छन् जसमा पनि २० वर्ष र सो भन्दा कम उमेरका युवाहरुमाझ यो अत्याधिक लोकप्रिय मानिन्छ । तर कतिपय राजनीतिज्ञहरुले चिनियाँ कम्पनी...
Suvadin Media 363 0
मोबाइल चार्जमा राखेर सुत्‍नुहुन्छ ?, सावधान !
एजेन्सी । आफूले सुत्नु अगाडि खाटमा चार्ज गरेर राखेको ट्याब्लेट बलेर बिहान उठ्दा डस्ना समेत प्वाल पारिदिएपछि एक एघार वर्षीय युवक आश्चर्यमा परे । यसरी धेरैपटक प्राविधिकविद्हरुले मोबाइल चार्ज गर्दा जल्न...
धनी-गरिबको आहाराबारे मलमूत्रबाट पत्ता लाग्‍ने
बीबीसी । अष्ट्रेलियाको ‘वेस्टवाटर’ अर्थात ढलमा फाइबर, क्याफिन, ड्रग्स सम्बन्धी अध्ययन गर्ने क्रममा धनी र गरिब समुदायले सेवन गर्ने खानेकुराबीच ठूलो भिन्नता पाइएको हो । युनिभर्सिटी अफ...
मान्छेलाई साथी किन चाहिन्छ ?
एजेन्सी । आफूलाई एउटा सिङ्गो उमेर समूहको मित्रतामा सीमित राख्नु भनेको तीन स्कुप आइसक्रिम खाँदा सबै एउटै फ्लेबरको अर्डर गर्नु जस्तै हो । तरपनि पछिल्लो समय हाम्रो समाज उमेर समूहले विभाजित भइरहेको प्रशस्...
हिँडाइको चालले पनि शारीरिक र मानसिक असर, 'सुस्त ह...
एजेन्सी । तपाईं/हाम्रो हिँड्ने शैली एकनास हुँदैन । हिँड्न त सबै हिँड्छन् । तर, हिँड्ने शैली फरक हुन्छ । कोही द्रुत गतिमा हिँड्छन् । कोही बिस्तारै हिँड्छन् । कोही हिँड्दा फुर्तिलो देखिन्छ, कोही सुस्त द...
Suvadin Media 340 0
मस्तिष्कको सक्रियताले निर्धारण गर्छ मानिसको आयु !
एजेन्सी । मानिसको जीवन आयुलाई धेरै कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जस्तै कतिपय व्यक्तिमा हुने वंशाणुगत समस्या नियन्त्रणको बाहिरको कुरा हो तर धेरै अवस्थामा जीवनआयु हाम्रो वातावरण र जीवनशैलीमा...
सान फ्रान्सिस्को । संयुक्तराज्य अमेरिकाको निकै लोकप्रिय अनलाइन भुक्तानी कम्पनी पेपल होल्डिङ्सले फेसबुकको अग्रसरतामा गठन भएको लिब्रा एसोसिएसनबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ । फेसबुकको अग्रसरतामा रह...
बोस्टन । एप्पलले शुक्रबार ल्याएको आइओएस १३.१.१ अपडेटमा नेपाली भाषा समावेश गरेको छ। यसको आइओएस १३.१ सम्म नेपाली थिएन । यसअघि नेपाली लेख्‍न चाहनेले हिन्दी भाषाको किबोर्डको सहायता लिनुपर्थ्य...
Suvadin Media 492 0
टन्सिल के हो ? यस्ता छन् लक्षण र बच्‍ने उपाय
टन्सिलको समस्या सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई हुनसक्ने भए पनि यसबाट मुख्य प्रभावित हुने भनेको बालबालिका नै हो। सामान्य भाषामा सबैले भन्ने गरेको टन्सिललाई मेडिकल भाषामा 'टन्सिलाइटिज' भन्ने गरिन्छ।...
बालबालिकालाई कति नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त ?
बालबालिकालाई राम्रो बनाउने बहानामा, अनुशासित बनाउने चक्करमा हामी उनीहरुलाई कतिपय काममा नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । यो गर, त्यो नगर भनिरहेका हुन्छौं । त्यती मात्र होइन, बच्चाले गर्ने हरेक गतिविधिमा...
क्लाइमेट समिटमा ग्रेताको सम्बोधन : तपाईँहरुलाई कहि...
संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सोमबार (नेपाली समय अनुसार गएराति) अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा एउटी बालिकाको भनाइ विश्वभरका मिडियामा तत्कालै हेडलाइन बने ।&n...
Suvadin Media 337 0
क्लाइमेट समिटमा ग्रेताको सम्बोधन : तपाईँहरुलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनौँ
तपाईं गुगल म्यापमा आफ्नो लाइभ लोकेसन साथीहरु र परिवारको सदस्यहरुसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी आफ्नो लाइभ लोकेसनको जानकारी सेयर गर्दा केही हानी हुँदैन भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक नै हो । य समा तपा...
Suvadin Media 419 0
जिन्दगीको यू-टर्नमा अटोरिक्सामाको देन !
बाजुरा । युवा भन्ने बित्तिकै गरिखाने ऊर्जा भएको समूह बुझिन्छ । तर पछिल्लो समय श्रम गरेर खाने युवाहरुको संख्या पातलिँदै गएको छ । ठूलो काम खोज्ने, जागिरलाई मात्र रोजगारी भन्ने मान्यताले यहाँका...
रजस्वला हुँदाको रगत देखाउने विज्ञापन नियमसम्मत भएक...
बीबीसी । रजस्वला हुँदा आएको रगत भएको दृश्य समाविष्ट विज्ञापन नियमसम्मत रहेको र त्यसले प्रसारणको मापदण्ड उल्लङ्घन नगरेको निष्कर्ष अस्ट्रेलियाको टेलिभिजन नियमनकारी निकायले निकालेको छ। महिनावारी हुँदा...
रजस्वला हुँदाको रगत देखाउने विज्ञापन नियमसम्मत भएको ठहर
भारतमा ई–सिगरेटमाथि प्रतिबन्ध
नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले ई–सिगरेटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले ई–सिगरेटको उत्पादन र बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ई–सिगरेटको उत्...
कोरियामा ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’, के ब्रा नलगाउनु ठिक ह...
सिउल । दक्षिण कोरियामा अहिले ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’ चलिरहेको छ । यो अभियान स्थानीय महिलाले #NoBra का साथ सामाजिक सञ्जालमा चलाएका हुन् । महिलाहरुले ब्रा नलगाएका तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा प्...
Suvadin Media 478 0
कोरियामा ‘नो ब्रा मुभमेन्ट’, के ब्रा नलगाउनु ठिक हो ?
आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइँदै, नेपालमै विकास भ...
काठमाडौं । विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनः सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण भन्ने नारा सहित असोज १ गते अर्थात आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा महत्वपुर्ण योगद...
आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइँदै, नेपालमै विकास भएका प्रविधिहरु प्रदर्शन गरिने
श्रीमान वडाध्यक्ष, बुहारी शिक्षिका अनि आफू ४० कटे...
कैलाली । जोशीपुर महादेउली मसामखामकी मनबुझौनी चौधरी अहिले ५० वर्षकी भइन् । उनी दुई वर्षदेखि नियमित विद्यालय जान्छिन् । ‘‘४ कक्षाका साना बालबालिकासँगै पढ्छु । नेपाली अक्षर सरर पढ्न सक्छु,&rs...
श्रीमान वडाध्यक्ष, बुहारी शिक्षिका अनि आफू ४० कटेसी ४ कक्षा
प्रदर्शन भड्काउने २१० युट्युब च्यानल डिलिट !
काठमाडौं । हङकङमा चलिरहेको राजनीतिक संकट र प्रजातन्त्रको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई भड्काउने खालका सामग्री पोस्ट गर्ने २१० वटा युट्युब च्यानल गुगलले बन्द गरेको छ । हाल भइरहेको प्रदर्शनलाई भड्काउने...
DilipKarki 763 0